Cayayaanka Bacriminta jaban Shirkadaha Mashiinka Qaboojiya iyo Warshad | YiZheng
Waa maxay Mashiinka Qaboojiyaha Caleenta?
Ku Mashiinka Qaboojiyaha Xawaaraha waxaa loogu talagalay in lagu yareeyo wasakheynta hawada qabow iyo hagaajinta deegaanka shaqada. Isticmaalka mashiinka qaboojiyaha durbaanka waa inuu gaabiyo geedi socodka soosaarka bacriminta. Ku habboonaanta mashiinka qalajinta ayaa si weyn u wanaajin kara heerka qaboojinta, ma aha oo kaliya yareynta xoogga shaqada, laakiin sidoo kale waxay sii fogeyneysaa qoyaanka qaar waxayna yareyneysaa heerkulka qurubyada bacriminta. Ku mashiinka meeldhexaadka ah Rotary sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu qaboojiyo waxyaabaha kale ee budada ah iyo kuwa granular. Qalabku wuxuu leeyahay qaab dhismeed is haysta, hufnaan heer sare ah, waxqabad lagu kalsoonaan karo iyo la qabsi xoog leh.
Mabaadi'da Shaqada ee Mashiinka Qaboojiyaha Caleenta Bacriminta
Mashiinka Qaboojiyaha Xawaaraha waxay qaadataa habka isdhaafsiga kuleylka si loo qaboojiyo qalabka. Waxay ku qalabeysan tahay baalal xoqan biraha muraayadaha birta ah ee alxanka leh horteeda tuubada iyo saxanka kor u qaadista dhamaadka silsiladda, iyo nidaamka dhuumaha kaabayaasha ah waa in lagu rakibaa mashiinka qaboojinta. Iyadoo dhululubadu si isdaba joog ah u wareegeysa, saxanka wiishka gudaha ayaa si isdaba joog ah kor ugu qaadaya granules-ka bacrimiyeyaasha kor iyo hoos si ay xiriir buuxa ula yeeshaan hawo qabow kuleylka is weydaarsiga. Bacriminta granular ayaa hoos loo dhigi doonaa ilaa 40 ° C ka hor inta aan la siidayn.
Astaamaha Mashiinka Qaboojiyaha Caleemaha
1.Bulleeyaha ah Mashiinka Qaboojiyaha Xawaarahawaa 14mm dhumuc adag oo qaab ahaan loo sameeyay tuubo muquun leh, oo leh faa'iidooyinka isku-uruurinta sare iyo hawlgalka xasilloon ee birta. Dhumucda saxanka wiishku waa 5mm.
2. Qalabka giraanta, nacnaca suunka rullaluistemadka iyo qaansada ayaa dhammaantood lagu shubay birta.
3. Xullo xaddid hawlgal macquul ah si aad isugu dheellitirto "quudinta iyo dabaysha", taas oo si weyn u wanaajinaysa waxtarka isdhaafsiga ee Mashiinka Qaboojiyaha Xawaaraha iyo yaraynta isticmaalka tamarta 30-50%.
4. Dhululubadu waxay qaadataa tuubada muquuninta, warshadda birta waxay si toos ah u isticmaashaa saxan isku mid ah si ay ugu dhex laasho bobbin si looga hortago qallooca marxaladda dambe; gaadiidka habboon wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood, iyo isku-xidhka dhejiska dhexdhexaadka ah ee is-goynta dahabku wuxuu hubiyaa is-dhexgal adag.
Mashiinka Bacriminta Mashiinka Mashiinka Muuqaalka Muuqaalka
Xulka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka
Waxaa jira noocyo badan oo ah Mashiinka Qaboojiyaha Xawaaraha, taas oo lagu dooran karo iyadoo loo eegayo baahida dhabta ah, ama la qaabeyn karo. Xuduudaha farsamada ugu muhiimsan waxaa lagu muujiyey jadwalka soo socda ：
Hore: Mashiinka Qalalan ee Rotary Single Silinda ee Ku Shaqeynta Bacriminta
Xiga: Mashiinka Daaweynta Bacriminta Rotary
Hordhac Muxuu yahay mashiinka xambaara Suumanka Suunka? Mashiinka Mashiinka Xaragada ee loo yaqaan 'Rubber Belt Conveyor' waxaa loo isticmaalaa xirxirida, rarista iyo dejinta alaabta ee keydka iyo bakhaarka. Waxay leedahay faa'iidooyinka qaabdhismeedka is haysta, hawlgal fudud, dhaqdhaqaaq habboon, muuqaal qurux badan. Mashiinka Mashiinka Mashiinka Xaraashka ah ayaa sidoo kale ku habboon ...
Hordhac Waa maxay Cajalad / Qaylo-dhaan dabiici ah & Bacriminta Qalabka Bacriminta? Taxanahan cajaladda granulating waxaa lagu qalabeeyaa seddex siideyn oo afka ah, oo fududeeya wax soo saarka isdaba jooga ah, waxay si weyn u yareysaa xoogga shaqaalaha waxayna hagaajisaa waxtarka shaqaalaha. Hoosudhaca iyo mootadu waxay adeegsadaan darawalka suunka dabacsan si ay si habsami leh ugu bilaabaan, hoos u dhig saameynta ...